About Us - Jution Silicone & fingotra (Dongguan) Co., Ltd
Jution Silicone & fingotra (Dongguan) Co., Ltd dia Professional Manufacturer specializes amin'ny fampandrosoana sy ny mpanamboatra silicone vokatra, be dia be nampiasaina tamin'ny Kitchenware sy Housewares. Ary dia naorina teo an 2005, hita ao amin'ny "amin'ny Factory Tontolo Izao" --DongGuan City. Factory manarona ny faritra maherin'ny 8.000 metatra toradroa, maherin'ny 150 mpandraharaha mahay. Efa lasa SA8000 2014, ISO9001: 2015, ISO14001 2014; ary nahazo ny " Avo sy New Teknolojia Enterprise " ny Firenena tamin'ny 2016.
Ary ny orinasa dia Nizara ny mahery Design injeniera ekipa; ny fametrahana mazava tsara bobongolo orinasa mpamokatra entana atrikasa; Post-forming departemanta; QC sampan-draharaha, ny sampan-draharaha ny fonosana. Amin'ny 3 karazana nandroso CNC machining foibe sy 3 EDM kilalaon'afo karazana milina ho an'ny tooling; 30 karazana Post-forming milina ho an'ny mamokatra, mihoatra ny 10 Pirinty natao tamin'ny & tenan'ny tsipika, koa nanana lehibe Vovoka-maimaim-poana fonosana atrikasa.
Miaraka amin'ny hery sy ambony be mpanjifa, dia mitarika ny fanaraha-maso ny vokatra rehetra, dia amim-pahombiazana tsara miaro. Afaka mamaritra sy ny fanamboarana vokatra araka ny mpanjifa 'fangatahana. Ny vokatra namidy ho 30 mahery amin'ny firenena sy ny faritra, miaraka amin'ny Disney, Coca-Cola, Nestle, Marlboro,-dalana, Ry namako, Daiso, Hello Kitty-, L'OCCITANE sy ny mpanjifa iraisam-pirenena fanta-daza.
Ny orinasa foana ny fanahin 'ny "toetra voalohany, mpanjifa voalohany, mitohy fanatsarana" fitsipika. Amin-kitsimpo manome vokatra fenitra ambony sy mahafa-po ny fanompoana ny mpanjifa. Ny orinasa mafy mino fa amin'ny mahery, tso-po ny fiaraha-miasa sy ny fanahin 'ny fanatsarana mitohy, mba hahazoana antoka fa afaka mahazo ny mpanjifa tapaka famatsiana, kalitao fanomezan-toky sy marim-potoana lahateny.